काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धरासाही बन्दै गएको छ । सात महिनाभन्दा बढी जारी गरिएको लकडाउनले विश्वभरका साना ठूला उद्योग, कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै गएको हो । पछिल्लो समय कतिपय मुलुकले लकडाउनको अन्त्य गर्दै जनजीवन सहज बनाउन थालेका छन् भने कतिपय मुलुक अझै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पुरानो लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । कोरोनाको प्रभावले विश्वकै व्यापार व्यवसाय ओरालो लागेका छ ।कतिपय व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा समेत पुगेका छन् भने धेरैले नियमित आम्दानी समेत गुमाएका छन् । तर कोरोना भाइरसले सबै गुमाउने वातावरण मात्र सृजना नगरी कतिपय अवसरका ढोका पनि खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसकै राम्रो उदाहरण हो नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको ई–कमर्स व्यवसाय । ई–कमर्स व्यवसाय कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै सुरुआत गरेर प्रभावकारी रुपमा बजारमा उत्रिएका छन् ।लकडाउनको समयमा परम्परागत व्यवसायहरु पलायन हुने अवस्थामा पुग्दा ई–कमर्स व्यवसायको भने आम्दानी र लोकप्रियता असामान्य रुपले बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि कोरोनाका कारण अधिकांश व्यापार व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् जसका कारण लाखौ मजदूरहरुको रोजगारी पनि गुमेको छ । तर, महामारीमा पनि केही यस्ता व्यापार छन् । जसले पहिले सामान्य अवस्थामाभन्दा व्यापार तथा यसबाट हुने आम्दानी पनि उच्च रुपले वृद्धी गरेका छन् । यस्ता व्यवसायमा ई–कमर्स व्यवसाय अग्रणी स्थानमा रहेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्रै प्रचलनमा रहेको ई–कमर्स व्यवसाय विगत तीन चार वर्षदेखि नेपालमा पनि भित्रिएको छ । यो व्यवसायमा केही वर्षअघिसम्म अनलाइन सपिङको विषयमा जानकारी नभएका नेपालीहरु एक्कासी पछिल्लो समय ई–कमर्स अर्थात अनलाइन सपिङमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसले परम्परागत रुपमा चल्दै आएको व्यापार व्यवसायमा समयसँगैं परिभाषा नै बदलिदिएको छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा गएर आफूलाई मन परेका सामानहरु रोजीरोजी खरिद गर्ने वातावरण नहुँदा नेपालीहरु घरभित्र नै बसीबसी मोबाइलबाट नै ई–कमर्स कम्पनीका मोबाइल एप र वेबसाइटबाट खोजे जस्तो ब्राण्ड र मूल्य तुलना गरी सहजै अर्डर गर्न थालेका छन् ।कोरोना महामारीकै बीचमा स्टार्टअप ई–कमर्स व्यवसाय फस्टाएका छन् । यो बीचमा ई–कमर्स व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो साइट हो ग्यापु । ग्यापुले यो महामारीलाई अवसरमा बदलेर अहिले उपत्यकाभर सेवा दिइरहेको छ । साथै कोरोना महामारीकै बीचमा चम्किएको कौसी खेति पनि अर्को स्टार्टअप हो ।त्यस्तै अहिले नेपाली बजारमा दराज, हाम्रो बजार, सस्तो डिल, फुडमाण्डु, ग्यापु, स्मार्ट डोको, गजबको, मेट्रो तरकारी, मुञ्चा डट कम, नेपवे, मेरो किराना स्टोर, सपमाण्डु, लजिस्टिक कम्पनी ई–कमर्समार्फत अनलाइन सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । साथै यी बाहेक अन्य विभिन्न होटल, रेष्टुरेण्ट तथा सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि सस्थानले समेत अनलाइन कारोबार सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका छन् ।कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरीको लकडाउनको बेलामा सेवा सुरु गरेको ग्यापुले अहिले दैनिक १० लाखको कारोबार गरिरहेको कम्पनीका संस्थापक ज्ञानेन्द्र खड्का बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा कारोबार थालेको भए अहिले जस्तो कारोबार नहुने उनको दाबी छ । तर लकडाउनका समयमा सबै मानिस घरमा बसेको र अनलाइन सेवा मार्फत आफूलाई चाहिएको सामान खरिद गर्ने प्रवृती बढ्दै गएकाले ग्यापुको कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने–‘कोरोनापछि अनलाइन सेवा लिने ग्राहक पनि बढेकाले व्यापार अकल्पनीय रुपमा बढेको छ । सामान्य अवस्थामा भएको भए यतिमाथि उठ्न करिब ३ वर्ष लाग्थ्यो ।’ साढे २ सय वटा आइटमबाट ई–कमर्स बिजनेसमा प्रवेश गरेको ग्यापुमा अहिले १० हजारभन्दा बढी आइटम पुगेका छन् । अहिले करिब ४५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । अहिले ग्यापु मात्रै हैन, अन्य धेरै स्टार्टअप ई–कमर्सहरु फस्टाउँदै गएका छन् ।नेपालमा सेवा दिइरहेका ई–कमर्स कम्पनीहरुका यस्ता छन १. दराज चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाले विगत चार वर्षदेखि नेपालमा दराज डट कममार्फत अनलाइन सेवा दिँदै आएको छ । दराजले घरायसी प्रयोजनका सामानसहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुको अनलाइन सेवा दिइरहेको छ । ग्राहकले घरमै बसेर आफूलाई आवश्यक परेको सामान खरिद गर्नका लागि दराजको मोबाइल एप वा इन्टरनेटमार्फत दराज डटकममा सामान अर्डर गरेर खरिद गर्न सक्छन् । लकडाउनेको समयमा पनि दराजले अनलाइन सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ । २. ग्यापु नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पश्चात अनलाइन सेवा सुरु गर्ने पहिलो ई–कमर्स कम्पनी हो ग्यापु । ग्यापुले गत चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि व्यवसायको सुरुआत गरेको हो । अहिले ग्यापु छोटो समयमा राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको छ । करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको यस कम्पनीले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा ग्रोसरी लगायतका सामान डेलिभरी गरेर राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले हालैका दिनमा सिभिल मलसँगको सहकार्यमा त्यहाँ रहेका सामान समेत बिक्री गर्न सुरु गरेको छ । ग्यापुले सबै प्रकारका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेबाट समेत भुक्तानी लिने व्यवस्था गरको छ ।त्यस्तै, ग्यापु डट कमले दशैंलाई लक्षित गर्दै लोकल खसी, कुखुरा र हाँस पनि होम डेलिभरी गर्ने योजना बनाएको छ । चेन रेस्टुरेन्टमा लोकप्रिय बाजेको सेकुवासँगको सहकार्यमा जिउँदै, खुइल्याएको र काटेर टुक्रा गरी उपभोक्ताको मागअनुसार होम डेलिभरी गर्ने ग्यापुका संस्थापक खड्काले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अधिकांश मानिसहरु खसी किन्दा रङ, सिङ हेरेर र तौल जोखेर लिने गरेका छन् । ग्यापुले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो कल गरेर उपभोक्तालाई देखाएर रोजेको खसी डेलिभरी गर्ने उनको भनाइ छ । ग्यापुले दशैंमा ५० लाख बढीको उपहार, क्यास ब्याक, छुट र बम्पर अफर समेत ल्याउने खड्काले जानकारी दिए ।३.फूडमाण्डू फूडमाण्डु अन्य अनलाइन सपिङमध्ये अर्को भिन्न खालको अनलाइन सेवा हो । फूडमाण्डूले मानिसको आवश्यकताअनुसार खाना तथा खाजाका परिकारहरु डेलिभरी गर्दै आएको छ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार अर्डर गरी फूडमाण्डूबाट सजिलै घरमै सेवा लिन सकिन्छ । फूडमाण्डू खानाको परिकार डेलिभरी गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी समेत हो । फूडमाण्डूको सेवा लिन मोबाइल एप वा अनलाइनमाध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।४. मेट्रो तरकारी लकडाउन पश्चात लोकप्रिय बन्दै गएको अर्को अनलाइन एप हो मेट्रो तरकारी । नेपाली बजारमा एक नयाँ अवधारणाका साथ सन् २०१२ मा स्थापना भएको मेट्रो तरकारी गृहणीलाई एक सजिलो माध्यम बनेको छ । मेट्रो तरकारी एक ग्रोसरीको सामान उपलब्ध गराउने नेपालको पहिलो अनलाइन रहेको छ । मानिस बजारमा तरकारी तथा फलफूल किन्नका लागि घण्टौ दौड्नु पर्ने कठिनाइलाई हल गर्न मेट्रो तरकारीको सेवा शुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।ई–कमर्सले रोजगारीका अवसर सृजना गर्दैकोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । अधिकांश उद्योग, व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्दा हजारौंले रोजगारी समेत गुमाएका छन । तर लकडाउन बीच उदाएका ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गरेका छन् । एउटा कम्पनीमा कम्तिमा ५० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । अहिले अझ ई–कमर्सको बजार बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुमा रोजगारीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।सबै ई–कमर्श कम्पनीमा करिब १५ सयभन्दा बढीले यो समयमा रोजगारी पाएको दाबी गरिन्छ । अहिले दराज अनलाइनले अस्थायी रुपमा करिब ७ सय कर्मचारी थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ग्यापुले दशैं र तिहारका लागि स्थायी र अस्थायी गरी १ सयभन्दा बढी कर्मचारी थप गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका सञ्चालक खड्काले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अहिले कम्पनीमा १ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । यसरी ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गरी सरकारले नै प्रोत्साहन गरे रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना हुने देखिन्छ ।अनलाइन व्यापार व्यवस्थापन गर्ने कानुनको अभाव पछिल्लो समय अनलाइन व्यवसाय बढ्दै गएपनि अहिलेसम्म यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनी मापदण्ड बनिसकेको छैन । बढ्दो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गरेर नेपालीहरु पनि अगाडि बढ्नु राम्रो भएको तर नेपालमा अनलाइन व्यापारका लागि कानुनी मापदण्ड नभएकाले यसबाट उपभोक्ता ठगिने डर भने कायमै रहेको उपभोक्ताहित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।सरकारले निश्चित कानुनी मापदण्ड बनाएर मात्र खुल्ला गर्दा उपयुक्त हुने अन्यथा निजी व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र उपभोक्ता ठगिरहने सम्भावना भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल्सिना बताउँछन् । त्यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनलाइन व्यापार बढ्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।विद्युतीय भुक्तानीमा पनि वृद्धी पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय कारोबारमा समेत वृद्धी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमलाई बढावा दिन निर्देशन दिएसँगै विद्युतीय कारोबार बढेको हो । यसले पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारलाई जोड दिएका छन् । सरकारले नै विद्युतीय कारोबारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकाले विगत केही वर्षदेखि यसको कारोबार बढ्दै गएको छ । तर लकडाउन र निषेधाज्ञाको बेलामा विभिन्न विद्युतीय कारोबार गर्ने सेवा प्रदायकमार्फत हुने भुक्तानी समेत तीव्र दरमा बढ्दै गएको छ ।कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्च उपभोक्ता विद्युतीय कारोबारमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । नेपाल क्लेयरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) मार्फत लकडाउनको अवधिमा मात्रै विभिन्न भुक्तानी प्रणालीमार्फत ५२.५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी कारोबारहरु भएको छ । एनसीएचएल लगायत अन्य ई–सेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती लगायतका भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकको पनि ग्राहक बढेका छन् । यो संकटले निम्त्याएको अवसरले अनलाइन कारोबार बढ्दै गएकाले पनि डिजिटल कोरोबार बढेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनेहरु समेत लकडाउनपछि बढ्दै गएका छन् ।
८ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:२८
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धरासाही बन्दै गएको छ । सात महिनाभन्दा बढी जारी गरिएको लकडाउनले विश्वभरका साना ठूला उद्योग, कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै गएको हो । पछिल्लो समय कतिपय मुलुकले लकडाउनको अन्त्य गर्दै जनजीवन सहज बनाउन थालेका छन् भने कतिपय मुलुक अझै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पुरानो लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । कोरोनाको प्रभावले विश्वकै व्यापार व्यवसाय ओरालो लागेका छ ।
कतिपय व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा समेत पुगेका छन् भने धेरैले नियमित आम्दानी समेत गुमाएका छन् । तर कोरोना भाइरसले सबै गुमाउने वातावरण मात्र सृजना नगरी कतिपय अवसरका ढोका पनि खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसकै राम्रो उदाहरण हो नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको ई–कमर्स व्यवसाय । ई–कमर्स व्यवसाय कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै सुरुआत गरेर प्रभावकारी रुपमा बजारमा उत्रिएका छन् ।
लकडाउनको समयमा परम्परागत व्यवसायहरु पलायन हुने अवस्थामा पुग्दा ई–कमर्स व्यवसायको भने आम्दानी र लोकप्रियता असामान्य रुपले बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि कोरोनाका कारण अधिकांश व्यापार व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् जसका कारण लाखौ मजदूरहरुको रोजगारी पनि गुमेको छ । तर, महामारीमा पनि केही यस्ता व्यापार छन् । जसले पहिले सामान्य अवस्थामाभन्दा व्यापार तथा यसबाट हुने आम्दानी पनि उच्च रुपले वृद्धी गरेका छन् । यस्ता व्यवसायमा ई–कमर्स व्यवसाय अग्रणी स्थानमा रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्रै प्रचलनमा रहेको ई–कमर्स व्यवसाय विगत तीन चार वर्षदेखि नेपालमा पनि भित्रिएको छ । यो व्यवसायमा केही वर्षअघिसम्म अनलाइन सपिङको विषयमा जानकारी नभएका नेपालीहरु एक्कासी पछिल्लो समय ई–कमर्स अर्थात अनलाइन सपिङमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसले परम्परागत रुपमा चल्दै आएको व्यापार व्यवसायमा समयसँगैं परिभाषा नै बदलिदिएको छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा गएर आफूलाई मन परेका सामानहरु रोजीरोजी खरिद गर्ने वातावरण नहुँदा नेपालीहरु घरभित्र नै बसीबसी मोबाइलबाट नै ई–कमर्स कम्पनीका मोबाइल एप र वेबसाइटबाट खोजे जस्तो ब्राण्ड र मूल्य तुलना गरी सहजै अर्डर गर्न थालेका छन् ।
कोरोना महामारीकै बीचमा स्टार्टअप ई–कमर्स व्यवसाय फस्टाएका छन् । यो बीचमा ई–कमर्स व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो साइट हो ग्यापु । ग्यापुले यो महामारीलाई अवसरमा बदलेर अहिले उपत्यकाभर सेवा दिइरहेको छ । साथै कोरोना महामारीकै बीचमा चम्किएको कौसी खेति पनि अर्को स्टार्टअप हो ।
त्यस्तै अहिले नेपाली बजारमा दराज, हाम्रो बजार, सस्तो डिल, फुडमाण्डु, ग्यापु, स्मार्ट डोको, गजबको, मेट्रो तरकारी, मुञ्चा डट कम, नेपवे, मेरो किराना स्टोर, सपमाण्डु, लजिस्टिक कम्पनी ई–कमर्समार्फत अनलाइन सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । साथै यी बाहेक अन्य विभिन्न होटल, रेष्टुरेण्ट तथा सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि सस्थानले समेत अनलाइन कारोबार सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका छन् ।
कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरीको लकडाउनको बेलामा सेवा सुरु गरेको ग्यापुले अहिले दैनिक १० लाखको कारोबार गरिरहेको कम्पनीका संस्थापक ज्ञानेन्द्र खड्का बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा कारोबार थालेको भए अहिले जस्तो कारोबार नहुने उनको दाबी छ । तर लकडाउनका समयमा सबै मानिस घरमा बसेको र अनलाइन सेवा मार्फत आफूलाई चाहिएको सामान खरिद गर्ने प्रवृती बढ्दै गएकाले ग्यापुको कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने–‘कोरोनापछि अनलाइन सेवा लिने ग्राहक पनि बढेकाले व्यापार अकल्पनीय रुपमा बढेको छ । सामान्य अवस्थामा भएको भए यतिमाथि उठ्न करिब ३ वर्ष लाग्थ्यो ।’ साढे २ सय वटा आइटमबाट ई–कमर्स बिजनेसमा प्रवेश गरेको ग्यापुमा अहिले १० हजारभन्दा बढी आइटम पुगेका छन् । अहिले करिब ४५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । अहिले ग्यापु मात्रै हैन, अन्य धेरै स्टार्टअप ई–कमर्सहरु फस्टाउँदै गएका छन् ।
नेपालमा सेवा दिइरहेका ई–कमर्स कम्पनीहरुका यस्ता छन
चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाले विगत चार वर्षदेखि नेपालमा दराज डट कममार्फत अनलाइन सेवा दिँदै आएको छ । दराजले घरायसी प्रयोजनका सामानसहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुको अनलाइन सेवा दिइरहेको छ । ग्राहकले घरमै बसेर आफूलाई आवश्यक परेको सामान खरिद गर्नका लागि दराजको मोबाइल एप वा इन्टरनेटमार्फत दराज डटकममा सामान अर्डर गरेर खरिद गर्न सक्छन् । लकडाउनेको समयमा पनि दराजले अनलाइन सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पश्चात अनलाइन सेवा सुरु गर्ने पहिलो ई–कमर्स कम्पनी हो ग्यापु । ग्यापुले गत चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि व्यवसायको सुरुआत गरेको हो । अहिले ग्यापु छोटो समयमा राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको छ । करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको यस कम्पनीले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा ग्रोसरी लगायतका सामान डेलिभरी गरेर राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले हालैका दिनमा सिभिल मलसँगको सहकार्यमा त्यहाँ रहेका सामान समेत बिक्री गर्न सुरु गरेको छ । ग्यापुले सबै प्रकारका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेबाट समेत भुक्तानी लिने व्यवस्था गरको छ ।
त्यस्तै, ग्यापु डट कमले दशैंलाई लक्षित गर्दै लोकल खसी, कुखुरा र हाँस पनि होम डेलिभरी गर्ने योजना बनाएको छ । चेन रेस्टुरेन्टमा लोकप्रिय बाजेको सेकुवासँगको सहकार्यमा जिउँदै, खुइल्याएको र काटेर टुक्रा गरी उपभोक्ताको मागअनुसार होम डेलिभरी गर्ने ग्यापुका संस्थापक खड्काले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अधिकांश मानिसहरु खसी किन्दा रङ, सिङ हेरेर र तौल जोखेर लिने गरेका छन् । ग्यापुले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो कल गरेर उपभोक्तालाई देखाएर रोजेको खसी डेलिभरी गर्ने उनको भनाइ छ । ग्यापुले दशैंमा ५० लाख बढीको उपहार, क्यास ब्याक, छुट र बम्पर अफर समेत ल्याउने खड्काले जानकारी दिए ।
फूडमाण्डु अन्य अनलाइन सपिङमध्ये अर्को भिन्न खालको अनलाइन सेवा हो । फूडमाण्डूले मानिसको आवश्यकताअनुसार खाना तथा खाजाका परिकारहरु डेलिभरी गर्दै आएको छ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार अर्डर गरी फूडमाण्डूबाट सजिलै घरमै सेवा लिन सकिन्छ ।
फूडमाण्डू खानाको परिकार डेलिभरी गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी समेत हो । फूडमाण्डूको सेवा लिन मोबाइल एप वा अनलाइनमाध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
४. मेट्रो तरकारी
लकडाउन पश्चात लोकप्रिय बन्दै गएको अर्को अनलाइन एप हो मेट्रो तरकारी । नेपाली बजारमा एक नयाँ अवधारणाका साथ सन् २०१२ मा स्थापना भएको मेट्रो तरकारी गृहणीलाई एक सजिलो माध्यम बनेको छ । मेट्रो तरकारी एक ग्रोसरीको सामान उपलब्ध गराउने नेपालको पहिलो अनलाइन रहेको छ । मानिस बजारमा तरकारी तथा फलफूल किन्नका लागि घण्टौ दौड्नु पर्ने कठिनाइलाई हल गर्न मेट्रो तरकारीको सेवा शुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
ई–कमर्सले रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । अधिकांश उद्योग, व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्दा हजारौंले रोजगारी समेत गुमाएका छन । तर लकडाउन बीच उदाएका ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गरेका छन् । एउटा कम्पनीमा कम्तिमा ५० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । अहिले अझ ई–कमर्सको बजार बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुमा रोजगारीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।
सबै ई–कमर्श कम्पनीमा करिब १५ सयभन्दा बढीले यो समयमा रोजगारी पाएको दाबी गरिन्छ । अहिले दराज अनलाइनले अस्थायी रुपमा करिब ७ सय कर्मचारी थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, ग्यापुले दशैं र तिहारका लागि स्थायी र अस्थायी गरी १ सयभन्दा बढी कर्मचारी थप गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका सञ्चालक खड्काले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अहिले कम्पनीमा १ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । यसरी ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गरी सरकारले नै प्रोत्साहन गरे रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना हुने देखिन्छ ।
अनलाइन व्यापार व्यवस्थापन गर्ने कानुनको अभाव
पछिल्लो समय अनलाइन व्यवसाय बढ्दै गएपनि अहिलेसम्म यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनी मापदण्ड बनिसकेको छैन । बढ्दो आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गरेर नेपालीहरु पनि अगाडि बढ्नु राम्रो भएको तर नेपालमा अनलाइन व्यापारका लागि कानुनी मापदण्ड नभएकाले यसबाट उपभोक्ता ठगिने डर भने कायमै रहेको उपभोक्ताहित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
सरकारले निश्चित कानुनी मापदण्ड बनाएर मात्र खुल्ला गर्दा उपयुक्त हुने अन्यथा निजी व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र उपभोक्ता ठगिरहने सम्भावना भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल्सिना बताउँछन् ।
त्यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनलाइन व्यापार बढ्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा पनि वृद्धी
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय कारोबारमा समेत वृद्धी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमलाई बढावा दिन निर्देशन दिएसँगै विद्युतीय कारोबार बढेको हो । यसले पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारलाई जोड दिएका छन् ।
सरकारले नै विद्युतीय कारोबारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकाले विगत केही वर्षदेखि यसको कारोबार बढ्दै गएको छ । तर लकडाउन र निषेधाज्ञाको बेलामा विभिन्न विद्युतीय कारोबार गर्ने सेवा प्रदायकमार्फत हुने भुक्तानी समेत तीव्र दरमा बढ्दै गएको छ ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्च उपभोक्ता विद्युतीय कारोबारमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । नेपाल क्लेयरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) मार्फत लकडाउनको अवधिमा मात्रै विभिन्न भुक्तानी प्रणालीमार्फत ५२.५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी कारोबारहरु भएको छ । एनसीएचएल लगायत अन्य ई–सेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती लगायतका भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकको पनि ग्राहक बढेका छन् । यो संकटले निम्त्याएको अवसरले अनलाइन कारोबार बढ्दै गएकाले पनि डिजिटल कोरोबार बढेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनेहरु समेत लकडाउनपछि बढ्दै गएका छन् ।
Prevकाँग्रेस महामन्त्री कोइराला कोरोना संक्रमणमुक्त
नेपाल–चीनबीचको सीमा सम्बन्धमा सरकारले हतारमा धारणा सार्वजनिक गर्यो– कांग्रेसNext